41. ဗမာသမိုင်းလေ့လာရေး - ဒေါက်တာသန်းထွန်း
... ဒေါက်တာသန်းထွန်း၏စာပေဆောင်းပါးများ Dr.Than Tun's Written Facts ...
42. သူသာသလို အများသူငါလည်း သာတယ်(၂) - ဒေါက်တာသန်းထွန်း
... ဖြစ်ပါသည်။ Download Related Articles ဒေါက်တာသန်းထွန်း၏စာပေဆောင်းပါးများ Dr.Than Tun's Written Facts ...
43. ခုနှစ် လ ရက်စဉ်သမိုင်းများ
... ဦးစီးအဖွဲ့ဝင်များ ဖြစ်ကြသော ဒေါက်တာဘမော်၊ သခင်နု၊ ဗန္ဓုလဦးစိန်၊ ဦးထွန်းအောင်၊ သခင်အောင်ဆန်း၊ သခင်သန်းထွန်း စ​သူတို့နှင့် တို့ဗမာအစည်းအရုံးဝင်များ၊ ဆင်းရဲသား ဝံသာနုအဖွဲ့ဝင်များ၊ ဗမာ့လက်ရုံးတပ်နှင့်ဓားမတပ်ဖွဲ့များ၊ ...
... သခင်သန်းထွန်း၊ ဦးဘဘေ၊ ဦးဆက်၊ ဆာမောင်ကြီး၊ ဦးဘဦး၊ ဦးပု၊ ဦးဆစ်ဒနီလူနီ၊ ဦးဘသန်း၊ ဦးဘိုးဗျော့၊ ဦးဘကလေး၊ ခန်းဗဟာဒူးနိုက်ကွား ရားနှင့် ဦးခူအိခွက်တို့ ရန်ကုန်မြစ်အတွင်းရှိ ကမ်ဘာလေ စစ်သင်္ဘော (HMS Cumberland) ...
... ၅။ သခင်သန်းထွန်း ၆။ ဦးဘဘေ ၇။ စောဘဦးကြီး ၈။ ဗိုလ်ကျော်ဇော ၉။ ဗိုလ်မောင်မောင် ၁ဝ။ ဗိုလ်ဇော်မင်း (​ဦး​မောင်မောင်ကျော်ဝင်း) ၁၁။ ဦးညိုထွန်း မြန်မာနိုင်ငံ စစ်ပြေးအစိုးရ အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် ဦးတင်ထွဋ်လည်း ...
... (စာမူ) စတုတ္ထဆု။ ငွေ ၅ဝဝိ၊ သူရဇော်ရေး ရောင်နီဦး ကဗျာများ (စာမူ) မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုနှင့်အနုပညာဆု ဒုတိယဆု။ ငွေ ၁ဝဝဝိ၊ ဦးအောင်သန်းထွန်းရေး မြန်မာမင်းများ တရားစီရင်ရေး(စာအုပ်)။ တတိယဆု။ ငွေ ၇၅ဝိ၊ သပြေညို ...
47. ဂန္ဓာရ - ဦးသန်းထွန်း(ရွှေဘို)
eBook file size: 81.5 KB ebook pages:5Publication: ၁၉၉၂ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ၊ စာစဉ် ၈၃ ထုတ် အတွေးအမြင်မဂ္ဂဇင်းတွင် ပါသော ဆောင်းပါး ဖြစ်ပါ သည်။ Download Related Articles ဦးသန်းထွန်း(ရွှေဘို)၏စာအုပ်ဆောင်းပါးများ ...
48. ဆတိုင်မွှတ်ဦးကူး နှင့် လူဝံမောင်နှမ - မလိခ
... - ဒေါက်တာသန်းထွန်း ...
49. ကချင်ပြည်နယ် ရဝမ်စီရင်ထုံး - ဦးအောင်သန်းထွန်း
eBook file size: 65.2 KB ebook pages: 8 Publication: ၁၉၇၄ ခုနှစ်၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလ၊ အတွဲ ၂၂၊ အမှတ် ၄ ထုတ် မြဝတီမဂ္ဂဇင်းတွင် ပါသော ဆောင်းပါး ဖြစ်ပါသည်။ Download -Related Articles- ကခ်င္ေျမ ...
50. ကက္ကူမွေတော်သမိုင်း နှင့် အနုပညာဗိသုကာလက်ရာများ - ကြည်ကြည်ချို (တောင်ကြီးတက္ကသိုလ်)
eBook file size: 5.79 MB ebook pages: 32 Publication: 2015 November ထုတ် ဒေါက်တာသန်းထွန်း ကွယ်လွန်ခြင်း ဆယ်နှစ်​ပြည့်အထိမ်းအမှတ်စာအုပ်တွင် ပါသော ဆောင်းပါး ဖြစ်ပါသည်။ Download -Related Articles- ...